चीनबाट किन आयो ओली र प्रचण्डलाई मिल्न दबाब ? - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com चीनबाट किन आयो ओली र प्रचण्डलाई मिल्न दबाब ? - खबर प्रवाह
चीनबाट किन आयो ओली र प्रचण्डलाई मिल्न दबाब ?
समाचार विश्लेषण । चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकतामा जोड दिइन् । उनले नामै तोकेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मिल्नुपर्ने बताएपछि राजनीतिवृत्तमा तरंग आएको छ ।
अर्कोतर्फ, चीन नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन खुलैरै लागेको छ । आफू अनुकूलको अवस्था निर्माण गर्न सक्रिय देखिन्छ । तत्कालीन नेकपाको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँगको प्रशिक्षण, नेकपामा विवाद बढ्दा चिनियाँ टोलीको नेपाल भ्रमण र भूमिका हुँदै चिनियाँ राजदूत यान्छीको कम्युनिस्ट पार्टीहरु बलियो बनाउन केन्द्रित सक्रियताले पनि त्यही देखाउँछ । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरु मजबुत हुँदा नै आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूरा हुनसक्ने बुझाईका आधारमा चीन नेपाल मामलामा प्रस्तुत हुनुले देशको राजनीतिमा नयाँ घटनाक्रमहरु विकास हुने देखिन्छ ।
साफ च्याम्पियनसिप : उपाधिका लागि नेपाल र भारत भिड्ने
लोकतन्त्रको माला जपेर लुटतन्त्र मच्चाउन पाइँदैन : केपी ओली